Omume Anyị Nwere Ike Ịkpasu Chineke Iwe​—Otú Anyị Nwere Ike Isi Mee Ka Obi Dị Ya Ụtọ
Asụsụ ahụ a ghagburu na Bebel mere ka ndị na-arụ ụlọ ahụ ghara ịrụkọtali ọrụ ọnụ n’ihi na ha enwezighị ike ịghọta ihe ibe ha na-ekwu. Ma, asụsụ ọhụrụ ndị ha maliteziri ịsụ nwekwara okwu niile dị mkpa mmadụ na ibe ya ga-eji akparịta ụka. Narị afọ ole na ole a ghagbuchara asụsụ ụmụ mmadụ na Bebel, ndị mmadụ rụrụ ọtụtụ obodo ndị mmadụ bijuru ma nwee ndị na-alụrụ ha agha. Ha na ndị si mba ọzọ malitekwara ịzụkọrịta ahịa. (Jenesis 13:12; 14:1-11; 37:25) Hà ga-emeli ihe ndị a niile ma a sị na asụsụ ha enweghị mkpụrụ okwu zuru ezu ndị mmadụ ga-aghọta nke ọma? Ihe ndị a Baịbụl kwuru gosiri na asụsụ mbụ ụmụ mmadụ sụrụ na ndị nke ha malitere ịsụ na Bebel abụghị mmadụ ibe ubé na iti mkpu ka anụmanụ, kama ha bụ asụsụ nwere okwu niile ga-eme ka mmadụ ghọta ihe ibe ya na-ekwu. Ihe ndị ọkachamara chọpụtara n’oge a gosiri na nke a bụ eziokwu. Otu akwụkwọ na-ekwu gbasara asụsụ ụmụ mmadụ kwuru na “o nweghị obodo e lebarala asụsụ ha anya nke na-enweghị okwu niile mmadụ nwere ike iji gwa ibe ya okwu, ma obodo ndị nke a sịrị na ha mepere emepe ma ndị nke a sịrị na ha emepeghị emepe.” Otu ọkà mmụta aha ya bụ Steven Pinker kwukwara ihe yiri ya n’akwụkwọ o dere. Ọ sịrị: ‘E nwetụbeghị mgbe mmadụ na-ebe ubé ka anụmanụ tupu ya asụwa asụsụ ka mmadụ.’